musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Zvakakomba Nice ndege ikozvino paA220-300
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Technology • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Breeze Airways, inendege yeAmerica inotungamirwa neCottonwood Heights, Utah.
Ndege yakatangwa naDavid Neeleman, uyo akambobatanidza Morris Air, WestJet, JetBlue, uye Azul Linhas Aereas.
Breeze Airways yakaratidza yayo nyowani A220-300 dhiri uku uchisimbisa kuti yasvika chibvumirano chekutenga neAirbusus kune makumi maviri enendege.
Iri raimbove risingazivikanwe odha re20 rinounza bhuku reBreeze rakazara ku80 A220-300s, yekutanga yacho ichaendeswa muQ4 2021.
Basa rependi nyowani yendege rakapedzwa kunzvimbo yeAirbus muMobile, Alabama, iyo ichaendesa ingangoita imwechete A220 pamwedzi kuBreeze mumakore matanhatu nehafu anotevera.
Breeze Airways, imwe ndege yendege yeU.S. yakati nezvekambani iyi: “Tiri timu yendege, kugamuchira vaeni, uye vanofarira zvehunyanzvi vanofunga kuti kubhururuka ndiyo ropafadzo nemukana mukuru pasi rose. Uye, tinotenda kuti chinofanirwa kuve chiitiko chinokwanisika uye chechokwadi kune wese munhu. ”
“Tose, takagadzira Breeze Airways ™ - nyowani yendege inosanganisa tekinoroji nemutsa. Breeze inopa isingaregi sevhisi pakati pemigwagwa isina kuchengetedzwa kuyambuka iyo US pamitengo inodhura.
“Nekunyorera zvisina musono, pasina shanduko kana mari yekudzima uye zvakagadzirwa nendege zvakagadzirwa kuburikidza neapp yakapfava uye yakapusa, Breeze inoita kuti zvive nyore kutenga uye nyore kubhururuka. Tikugashirei kuBreeze, Seriously Nice ™ nendege. ”
Ndege inoronga kutanga ndege nendege dzeAirbus mukota yechipiri ya2022.
Breeze Mhepo maguta
Iko kugona kweA220 kwakakwirira kunotsigira zvinangwa zvebhizimusi nyowani zvekupa ruzivo rwakakura rwekufamba, nemari shoma uye kukwirisa. Breeze inotarisirwa kuendesa isingamire pakati pemigwagwa isina kuchengetedzwa kuyambuka iyo US nemari dzinokwanisika.
Breeze yakatanga mashandiro enhandare muna Chivabvu 2021. Iyi yekutanga A220 ndiyo ndege yekutanga yekutanga ichaitwa nendege.
Iyo A220 ndiyo yega ndege yechinangwa-yakavakirwa pamusika wechigaro we100-150 uye inounza pamwechete mamiriro-e-iyo-eerodynamics, zvigadzirwa zvemberi uye Pratt & Whitney yazvino-chizvarwa PW1500G yakagadzirirwa injini turbofan. Ichinobatsira kubva kumatekinoroji achangoburwa, iyo A220 ndiyo ndege yakanyarara kwazvo, yakachena, uye ine hunyanzvi muchikamu chayo.
Inoratidzira ne50% yakaderedzwa ruzha tsoka uye inosvika makumi maviri neshanu yepasi mafuta akatsva pachigaro kana ichienzaniswa nendege dzechizvarwa chekare, pamwe nekukomberedza makumi mashanu muzana ezasi emhepo yeNox pane zviyero zveindasitiri, iyo A25 ndege huru yekuita kwemaguta.
Anopfuura 170 A220s akaendeswa kune vanoshanda gumi muAsia, North America, Europe, uye Africa, zvichiratidza kugona kwakanyanya kwenhengo yemhuri yazvino yeAirbus.